1.	मालपोत कार्यालयमा प्रणाली मार्फत जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्य गर्नको लागि प्रयोगमा आउने प्रयोगकर्ताहरु (users) के के हुन? प्रणाली संचालनमा तिनीहरुको जिम्मेवारी के के हुन्छ ?
1)	प्रणाली व्यवस्थापक(सिष्‍टम एडमिनिस्ट्रेटर) 	मुख्यप्रणालीव्यवस्थापक (मेन सिष्‍टम एडमिनिस्ट्रेटर-Super Admin) 	स्थानीयप्रणाली व्यवस्थापक (लोकल सिष्‍टम एडमिनिस्ट्रेटर-Admin) 2)	प्रणाली सञ्‍चालनकर्ता(सिष्‍टम अपरेटिङ्ग युजर) 	Service Desk (SD) 	Junior Revenue Officer (JRO) 	Land Revenue Officer (LRO) 	Chief Land Revenue Officer (CLRO) प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी निर्देशिका, २०७१ तथा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७४ मा व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ।
2.	प्रयोगकर्ताले पासवर्ड विर्सेमाकसरी रिकभर गर्न सकिन्छ?
होम पेजको“पासवर्ड विर्सनु भयो?” भन्ने लिंकमा क्लिकगरी आउने पेजमा प्रयोगकर्ताको नाम/मोवाइल नं./इमेल भनिएको ठाउँमा युजर बनाउँदा प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएकोआफ्नो प्रयोगकर्ताको नाम (Username) वा मोवाइल नं. वा इमेल ठेगाना दिई“निवेदन दर्ता गर्नुहोस” माक्लिक गर्दा तपाईको पासवर्ड तपाईकै मोवाइलमा मेसेजको रुपमा आउने छ ।
3.	(Admin) वा विभागको सुपर एडमिन प्रयोगकर्तालेअर्को कुनै प्रयोगकर्ताको पासवर्ड तथा गोप्यकोड हेर्नतथा प्रयोग गर्न सक्छ ?
(Local Admin) वा विभागको सुपर एडमिन प्रयोगकर्तालेअर्को कुनै प्रयोगकर्ताको पासवर्ड तथा गोप्यकोड हेर्नर प्रयोग गर्नसक्दैन तर परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।यसरी पासवर्ड परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित प्रयोगकर्ताको जानकारीको लागि प्रणालीमा दर्ता भएको प्रयोगकर्ताको मोवाइल नम्बरमा मेसेज जाने व्यवस्था छ ।
4.	प्रयोगकर्ताले प्रणलीमा लगिन गर्दा सही (Correct) युजरनेम र पासवर्ड प्रविष्ट गर्दा समेत लगिन हुन सकेन भने के गर्ने?
सही युजरनेम र पासवर्ड प्रविष्ट गर्दा समेत लगिन हुन सकेन भने आफ्नो किवोर्डमाCAPS LOCK प्रेस भएको (Caps Lock on) वाटास्कबारमा नेपाली भाषा छनौट भएको हुन् सक्छ। CAPS LOCK प्रेस भएको भए अफ गर्नुहोस् तथा टास्कबारमा नेपाली भाषा छनौट भएको भए English मा परिवर्तन गरीपुन: कोशिस गर्नुहोस् ।
5.	प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट(Account/Username) ब्लक कस्तो अबस्थामा हुन्छ ? युजर ब्लक भएमा के गर्ने ?
पाँच पटकसम्म पासवर्ड गलत दिएमा उक्त युजरनेम ब्लक हुन्छ ।आफ्नो युजरनेम ब्लक भएमा आफ्नो कार्यालयको स्थानीय प्रणाली व्यवस्थापक (Admin) लाई अनब्लकको लागि अनुरोध गरी अनब्लक गर्न सकिन्छ वा प्रश्न नम्बर २ बमोजिमको स्टेप सम्पन्न गरी आफ्नो मोबाईल नम्बरमा मेसेज प्राप्त गरेर समेत युजरनेमअनब्लक गर्न सकिन्छ ।
6.	प्रयोगकर्ताले कति समयको अन्तरालमा आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुन्छ?
साधारणतयामहिनामा कम्तिमाएकचोटी आफ्नो पासवर्ड परिवर्तन गर्दासुरक्षित हुन सकिन्छ।
7.	प्रयोगकर्तासँग युजरनाम र पासवर्ड हुँदा हुदै पनि निवेदन दर्ता/रुजु/स्वीकृत गर्न किन गोप्य कोड आवश्यक पर्छ ?
दुई तहको सुरक्षाको व्यवस्था गरिएकोछ।लगिन गर्दा प्रयोग हुने युजरनेम र पासवर्डका साथैनिवेदन दर्ता/रुजु/स्वीकृत लगायतका कार्य गर्दा आफ्नो गोप्यकोड प्रणालीमा अनिवार्यरुपमा प्रविष्ट गर्नु
8.	कारोबार दर्ता/रुजु/स्वीकृत गर्न आवश्यक पर्ने गोप्यकोड प्रयोगकर्ताले आफैले परिवर्तन गर्न मिल्छ की मिल्दैन?
कुनै प्रयोगकर्ताको गोप्यकोड परिवर्तन गर्ने कार्य हाल कार्यालयको स्थानीय प्रणाली व्यवस्थापक (Admin) लाई मात्र दिइएको छ।
9.	के कुनै प्रयोगकर्ताले गरेका कार्यहरुको लग हेर्न सकिन्छ? प्रयोगकर्ताले दैनिकरुपमा गरेका कार्यहरुको नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी कस्को हो?
प्रयोगकर्ताहरुले निवेदन दर्ता गरेको, रुजु गरेको, स्वीकृत गरेको तथा विवरण शंसोधन गरेको कार्यको लग “प्रतिवेदप्रयोगकर्ताको लगिन प्रतिवेदन” मार्फतहेर्न सकिन्छ ।
10.	प्रयोगकर्ताले औठाछाप प्रयोग गरी प्रणालीमा लगिन गर्न सक्छ?
प्रयोग गरी प्रणालीमालगिन गर्न सकिन्छ
1.	प्रणालीमा व्यवस्था भएको “विद्युतीय अभिलेख शंसोधन” मोडुल के को लागि प्रयोग गरिन्छ ?
प्रणालीमा भएको डाटा सम्बन्धी त्रुटी सच्याउनको लागिराजस्व नलिई गरिने कार्यहरुको लागि“विद्युतीय अभिलेख शंसोधन”मोडुलको प्रयोग गरिन्छ ।
2.	कुन अवस्थामा “विद्युतीय अभिलेखशंसोधन” र कुन अवस्थामा “शंसोधन” मोडल चलाउने हो ?
प्रश्न नम्बर १ बमोजिमको अबस्थामा “विद्युतीय अभिलेखशंसोधन” चलाउने हो भने घर कायम, फोटा टाँस लगायत मालपोत कार्यालयमा प्रक्रीया पुगाई र नियमनुसारकोराजस्व समेत लिई गर्नु पर्ने कार्यको लागि शंसोधन मोडुल चलाउनु पर्छ ।
3.	प्रणाली मार्फत जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्दा क्रेता वा विक्रेताको विवरण तथा कित्ता विवरणजग्गाधनी दर्तास्रेस्ता बमोजिम प्रणालीमा प्रविष्ट नभएको पाइएमा कसरी अद्यावधिक गर्ने?
प्रमाणको आधारमा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तामा भएको विवरणलार्इ मान्यता दिई कैफियत समेत जनाई प्रणालीमा व्यवस्था गरिएको “विद्युतीय अभिलेखशंसोधन”मोडुल मार्फत विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ। प्रणालीमा कुनै कित्तामा रहेको जग्गाधनीको विवरण गलत प्रविष्ट भएको पाइएमा जग्गाधनीको स्वमित्व समाप्त गर्ने की जग्गाधनीको विवरण शंसोधन गर्ने ? गलत प्रवृष्टी भएको पाइएमा हालको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताका आधारमा “जग्गाधनीको स्वमित्वसमाप्त” (विद्धुतिय अभिलेख शंसोधनसम्पत्ती शंसोधनकित्ता विवरणजग्गाधनी शंसोधन बटनस्वमित्व समाप्त)गरी अब कायम हुने जग्गाधनीको विवरण नयाँ जग्गाधनीको रुपमा थप्नु पर्छ। विद्युतीय अभिलेखशंसोधन मोडुल मार्फत कित्ता तथा जग्गाधनी विवरण छुट इन्ट्रि तथा शंसोधन गर्दा ध्यान दिनु पर्ने कुरा के के हुन ? जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता बमोजिमविद्युतीय अभिलेखशंसोधनमोडुल मार्फत प्रणालीमा डाटा अद्यावधिक, संशोधन र छुट डाटा इन्ट्रि गर्दा सर्भिस डेस्क, जुनियर अफिसर र मालपोत अधिकृतको भूमिका निर्वाह गर्ने कर्मचारीको दस्तखत रहने गरी गर्ने ।
4.	स्रेस्तामा खारिज भएको तर प्रणालीमा यथावत रहेको कित्ता विवरण प्रणालीमाकसरी खारिज गर्ने ?
एडमिनले “विद्धुतिय अभिलेख संसोधनजग्गाको निस्कृय”मोडुल मार्फत सो जग्गाको कित्ता विवरण निस्कृय गरि दिनु पर्छ ।
5.	कारोबारमा आएको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जामा भएको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट भएको देखिएनवा फरक परेमा के गर्ने?
6.	प्रणालीमा एउटै ब्यक्तिको एक भन्दा वढी विवरण (फरक फरक कित्तामा) देखिए के गर्ने ?
एक भन्दा बढी विवरणदेखिए ती विवरणहरु मर्ज गर्न सकिन्छ ।कारोबारमा रहेको कित्ताकोविवरण प्रविष्ट गर्दाखर्चदावी सम्बन्धी विवरण प्रविष्ट गर्न छुट भई LRO/CLRO बाट कारोबार स्वीकृत समेत भएको अवस्थामा उक्त विवरण शँसोधन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ? विवरण शँसोधन गर्न सकिने र नसकिने दुवै अवस्था रहेको छ । एडमिनले उक्त दर्ता नम्बर राखी सर्च गरेर हेर्दा यदि पहिले प्रविष्ट गरिएको थैली अंक देखिएमा सच्याउन सकिन्छ भने पहिले प्रविष्ट गरेको थैली अंक नदेखिएमा सच्याउन नसकिने अवस्था हुन्छ ।
7.	कार्यालयमा रहेको रोक्का कितावमा कित्ता रोक्का नभएको तर गलत प्रविष्ट भई वागलत माईग्रेसन भई प्रणालीमा रोक्का देखिए के गर्ने ?
रोक्का कितावमा सो कित्ता फुकुवा भनेर जनिएको छ भने सोही ब्यहोरा राखी “विद्धुतीय अभिलेख शंसोधन“ मोडुल मार्फत फुकुवा गर्नु पर्छ । कुन अवस्थामा “विद्युतीय अभिलेख शंसोधन” मोडुल मार्फतजग्गा/घर जग्गा रोक्का राख्नु पर्ने हुन्छ? रोक्का कितावमा कुनै कित्ता रोक्का देखिएको तर प्रणालीमा रोक्का प्रविष्ट भएको नदेखिएको अवस्थामा“विद्युतीय अभिलेखशंसोधन” मोडुलबाट जग्गा/घर जग्गा रोक्का राख्नुपर्दछ ।
8.	कुनैप्रयोगकर्ताले प्रणालीमा शंसोधन गरेको कित्ता तथा जग्गाधनीकोशंसोधन लग (Update Tracking Report) कसरी हेर्न सकिन्छ ?
विवरण“प्रतिवेदन”“जग्गा/घर जग्गाको प्रतिवेदन” अन्तर्गत “अघिल्लो कारोबार” मार्फत वा “प्रतिवेदन”“प्रयोगकर्ताको लग”“विद्युतीयअभिलेख शंसोधन” मार्फत हेर्न सकिने ब्यवस्था रहेकोछ ।
9.	एउटै जग्गाधनीको मोही भएको र नभएको कित्ताहरु प्रणालीमा कसरी छुट इन्ट्री गर्ने ?
एउटै जग्गाधनीको मोही भएको र नभएको कित्ताहरु एकै पटक “विद्धुतिय अभिलेख शंसोधनसम्पत्ती थप्न” मोडुलबाट इन्ट्रि गर्न मिल्दैन । के कुनै एक जना कर्मचारी (प्रयोगकर्ता)ले चाहेमा प्रणालीमा जग्गा कित्ता तथा जग्गाधनी विवरण छुट इन्ट्री, खारेज वा शंसोधन गर्न सक्छ? एक जना कर्मचारी (प्रयोगकर्ता)ले मात्र चाहेमा प्रणालीमा जग्गा कित्ता तथा जग्गाधनी विवरण छुट इन्ट्री, खारेज वा शंसोधन गर्न सक्दैन
1.	जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्दा कुन कुन व्यक्तीको औठाछाप, फोटोरदस्तखत विद्युतीय उपकरणबाट लिनु (Capture) पर्छ?
जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्दा लिखत पारितमा दिने(विक्रेता), लिने(क्रेता) र कम्तिमा दुई जना साक्षीहरुको, मिसिलको हकमा निवेदकको तथा रोक्काको हकमा प्रतिनिधिको औठाछाप, फोटोरदस्तखत विद्युतीय उपकरणबाट लिनु (Capture) पर्छ।
2.	जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्दा प्रणालीमा दिने(विक्रेता)को औठाछाप, फोटो र दस्तखत लिनु (Capture) अनिवार्य छ कि छैन ?
जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्दा प्रणालीमा दिने(विक्रेता)को औठाछाप, फोटो र दस्तखतविद्युतीय उपकरणबाट लिनु (Capture) अनिवार्य छ
3.	घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा लिने वा दिने व्यक्तिको हातका कुनै पनि औँला नभएको वा हस्त रेखा प्रष्ट नभई औठाछाप प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न नसकेमा के गर्ने?
घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा लिने वा दिने व्यक्तिको हातका कुनै औँला नभएको वा हस्त रेखा प्रष्ट नभएको अवस्थामा त्यस्ता ब्यक्तिको औठाछाप लिनु पर्दा मुलुकी ऐन कागज जाँचमहलको ६ र ७ नं. बमोजिम गरिनेछ
जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्दा कुन कुन व्यक्तीको औठाछापप्रणालीबाट प्रमाणीकरण (Verification) गर्नु पर्छ? पहिले नै LIN भएको जग्गाधनी (विक्रेताको ) औठाछाप प्रमाणीकरण भएन भने के गर्ने ?
प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको औंठाछाप पुन: रुजु हुन नसकेमा प्रावधिक कारणले हो वा अन्य कारणले हो छानबिन गरी निर्णय गरी प्रणालीमा पुन: औंठाछाप प्रविष्ट गराई सो को कैफियत समेत जनाज्ञ थप कारवाही गर्नु पर्छ ।
4.	जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्दा कुनै व्यक्तीको औठाछाप (Thumb) लिने क्रममादाँया बाँया औठाछाप बटनमा क्लिक भएन(Inactive/Disable) भने के गर्ने?
कुनै व्यक्तीको औठाछाप (Thumb) लिने बटनमा क्लिक भएन भने सो बटन भन्दा अघिको फिल्डमा क्लिकगरी Keyboard बाट TABKey Press गर्दा क्लिक हुन्छ।
5.	जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य डोर सुविधा प्रयोग गरी भएको अवस्थामादिने (विक्रेता)को औठाछाप, फोटो तथा हस्ताक्षर लिनु पर्छ कि पर्दैन ?
डोर सुविधा प्रयोग गरीजग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य हुँदा प्रणालीमा दिने (विक्रेता)कोऔठाछाप, फोटो र दस्तखतविद्युतीय उपकरणबाट लिन सकिदैन ।
6.	अधिकृत वारेशबाट जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्दा दिनेको फोटो, औठाछाप रदस्तखत लिनु पर्छ कि पर्दैन?
अधिकृत वारेशबाट जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्दा दिनेको फोटो, औठाछाप रदस्तखत लिनु पर्दैन ।
7.	साधारण वारेशबाट जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्दा लिनेको फोटो, औठाछाप रदस्तखत लिनु पर्छ कि पर्दैन?
वारेश दिनु भनेकै आफु अनुपस्थीत हुन नसकी अरु कसैलाइ अधिकार दिनु भएकोले सो अवस्थामा जग्गा /घर जग्गाको हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्दा लिने ब्यक्ति उपस्थित नहुने भएकाले निजको फोटो, औठाछाप रदस्तखत लिनु पर्दैन ।
8.	जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्दा साक्षीहरुको फोटो औठाछाप, दस्तखत तथा हस्ताक्षर र तीन पुस्ते विवरण अनिवार्य छ कि छैन?
जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्दा साक्षीको फोटो औठाछाप, दस्तखत तथा हस्ताक्षर र तीन पुस्ते विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु अनिवार्य छैन।तर सम्भव भए सम्म साक्षीहरुको पूर्ण विवरण लिनु पर्छ ।
9.	कित्ता रोक्का राख्दा रोक्का राख्ने निकायबाट आउने प्रतिनिधिको औठाछाप, फोटोर दस्तखत लिनु पर्छ कि पर्दैन?
कित्ता रोक्का राख्दा रोक्का राख्ने निकायबाट आउने प्रतिनिधिको औठाछाप, फोटोर दस्तखत पहिलो पटक विद्युतीय उपकरणबाट लिनु पर्छ भने दोस्रो पटक देखि प्रमाणीकरण (Verification) मात्र गरे पुग्छ ।
10.	एक ब्रान्ड/मोडलको कुनै Finger Capture Device बाट लिइएको औठाछाप अर्को ब्रान्ड/मोडेलको Finger Capture Device बाट Verify गर्न मिल्छ की मिल्दैन?
एक ब्रान्ड/मोडलको कुनै Finger Capture Device बाट लिइएको औठाछाप अर्को ब्रान्ड/मोडेलको Finger Capture Device बाट Verify गर्न मिल्छ ।
11.	कुनै व्यक्ती (लिने, दिने, साक्षी वा प्रतिनिधी) को औठाछाप प्रणालीमा कसरी प्रमाणीकरण (Verification) गर्न सकिन्छ?
लिने¸ दिने¸ साक्षी वा प्रतिनिधी को औठाछाप प्रणालिमा पहिलेनै लिइ सकेको छ भने पुन निजहरु कुनै पनि कारोवार गर्न आउदा औठाको छाप प्रणालिमा प्रमाणीकरण गर्नु पर्दछ ।
1.	जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि दिने (विक्रेता)को विवरण तथा उसको नाममा रहेको जग्गा / घर जग्गाको विवरण प्रणालीमा पहिले नै प्रविष्ट भएको हुनु पर्ने की नपर्ने ? नभए के गर्ने ?
जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि दिने (विक्रेता)को विवरण तथा उसको नाममा रहेको जग्गा / घर जग्गाको विवरण प्रणालीमा पहिले नै प्रविष्ट भएकै हुनु पर्दछ
जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य प्रणाली मार्फत गर्दा दिने ( बिक्रेता) को नागरिकता प्रमाण पत्र नम्बर उपलब्ध छैन भने सो को विवरण प्रणालीमा कसरी Fetch गर्ने ?
जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य प्रणाली मार्फतगर्दा दिनेको विवरण Fetch गर्न नामसारी र दा.खा. मोडुल बाहेक अन्य सवै मोडलहरुमा दिने (बिक्रेता) को नागरिकता प्रमाण पत्र नम्बर अनिवार्य छ ।
2.	प्रणालीमा जग्गाधनीको हक हिस्साको किसिम कस्तो अबस्थामा परिवर्तन गर्नु पर्छ ?
जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण हुँदा एकल स्वमित्वबाट संयुक्त नाममा वा संयुक्त नामबाट एकल स्वमित्वमा हक हस्तान्तरण भई जाने अवस्थामा “हक हिस्साको किसिम” परिवर्तन गर्नु पर्दछ ।
3.	प्रणालीमा व्यवस्था भएको “सम्पत्ती मर्ज” को प्रयोजन के हो ? सम्पत्ती मर्ज कुन अवस्थामा गरिन्छ ?
जुनसुकै कार्यालय अन्तर्गत रहेका फरक फरक कित्ताहरुमा जग्गाधनी एउटै हुनु पर्ने तर स्रेस्ता फरक फरक भई कम्प्युटरमा समेत जग्गाधनी विवरण दोहरिएर आएको देखिए ती विवरणहरु मर्ज गर्न सकिन्छ
जुनियर अफिसर वा LRO ले सर्भिस डेस्कमा पुन: रुजु नगरी कुनै ब्यक्ती वा सस्थाको विवरण आफैले सच्याउन सक्छन कि सक्दैनन?
जुनियर अफिसर वा LRO ले सर्भिस डेस्कमा पुन: रुजु नगरी कुनै ब्यक्ती वा सस्थाको विवरण आफैले सच्याउन सकिने ब्यवस्था रहेको छ ।
4.	क्रेताको रुपमा आएको संस्थाको दर्तानम्बर र मिति उपलब्ध भएन भने के राख्ने ?
क्रेताको रुपमा आएको संस्थाको दर्तानम्बर र मिति उपलब्ध भएनर उल्लेख हुन सक्ने देखिएन भने संस्थाको प्रतिनिधिलाइ सो संस्थाको स्थापित मिति घोषणा गर्न लगाइ सो मिति प्रविष्ट गर्नु पर्दछ ।
नेपाल सरकारको नाममा जाने कित्ताको जग्गाधनी प्रविष्ट गर्दा दर्ता नम्बर तथा मितिमा के प्रविष्ट गर्ने ?
नेपाल सरकारको नाममा जाने कित्ताको जग्गाधनी प्रविष्ट गर्दानेपाल सरकारमा टिकमार्क लगाउदा प्रणालीमाLIN नम्बरOO000000101 र जग्गाधनी“नेपाल सरकार” प्रविष्ट हुन्छ ।
5.	प्रणालीमा कित्ता दोहोरो देखिएमा कारोबार कसरी गर्ने ?
कित्ता दोहोरो(एउटै गा. वि. स., वडानम्बर, नक्सा/सिट नम्बर र कित्ता नम्बर) देखिएमा प्रणाली मार्फत कारोवार गर्न सकिदैन
कारोबारको लागि एक पटक छनौट गरेको प्रक्रिया र उप प्रक्रिया परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
कारोबारको लागि एक पटक प्रक्रिया र उपप्रक्रिया छनौट गरी निवेदनसंग सम्बन्धित अन्य कार्य गरिसके पछिप्रक्रिया र उपप्रक्रियाको नाम परिवर्तन गर्न सकिदैन र पुन: दोहोर्याएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । तसर्थ निवेदन प्रविष्ट गर्दा विषयमा स्पष्ट भएर सही प्रक्रिया र उपप्रक्रिया छनौट गर्नु पर्छ।
6.	दिने(विक्रेता) को स्वमित्वमा रहेको रैकर र गुठी अधिनस्थ जग्गाको हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य एउटै कारोबार/लिखत बाट गर्न मिल्ने की नमिल्ने?
दिने(विक्रेता) को स्वमित्वमा रहेको रैकर निजी र गुठी अधिनस्थ जग्गाको हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्दा अंशवण्डा¸अंश भर्पाइ जस्ता उपप्रक्रीयाहरुको लागि एउटै लिखत लेखी आए पनि प्रणालीमा अलग अलग मोडुलहरु (लिखत पारित र गुठी अधिनस्त जग्गाको कारोबार) प्रयोग गरी गर्नु पर्दछ ।
एक भन्दा बढी लिखत तर विक्रेता एउटै भएमा कारोबार कसरी गर्ने ?
एक भन्दा बढी लिखत तर विक्रेता एउटै भएको अवस्थामा एउटै निवेदनमा(एउटै DR) प्रविष्ट गर्नु पर्छ।
जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धीलिखत/मिसिल प्रणालीमा निवेदन अस्वीकृत र रद्द गर्ने भन्नाले के बुझिन्छ ?
जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धीलिखत/मिसिल प्रणालीमा अस्वीकृत र रद्द गर्ने भन्नाले एक किसिमले निवेदनलाई तामेल गर्नु हो ।
एउटै कित्तालाई एक भन्दा बढी अलग अलग वा एउटै प्रक्रिया/उपप्रक्रीयामाएउटै कार्यालयको एउटै शाखा वा फरक फरक शाखाबाट एकै पटक कारोबारको लागि समावेश गर्न सकिन्छ कि सकिदैन?
एउटै कित्तालाई एक भन्दा बढी अलग अलग वा एउटै प्रक्रिया/उपप्रक्रीयामाएउटै कार्यालयको एउटै शाखा वा फरक फरक शाखाबाट एकै पटक कारोबारको लागि समावेश गर्न सकिदैन ।
कारोबार गर्दा सँलग्न सपोर्टिङ डकुमेण्ट अपलोड गर्नु पर्ने कि नपर्ने?
घरजग्गा कारोवारको लागि लिखत/मिसिलसाथ पेश भएका आवश्यक कागजात (Supporting Documents) जस्तै घरबाटो सिफारिस, पूँजिगत लाभकरको स्वघोषणा फारम, राजस्व तिरेको रसिद आदि स्क्यान गरी प्रणालीमा अपलोड गर्नु पर्छ ।
7.	कारोबारको लागि दिने(विक्रेता) को विवरण लोड गर्ने क्रममा नागरिकता नम्बर राखी खोज्दा एक भन्दा बढी विवरण देखाएमा के गर्ने?
नागरिकता प्रमाण पत्र सम्बन्धी अन्य विवरण, तिन पुस्ते विवरण तथा जग्गाधनीकोठेगाना लगायत अन्य विवरणहरु जाँच गरी सही जग्गाधनी छनौट गर्नु पर्छ ।
8.	हक हस्तान्तरण हुने जग्गा/ घर जग्गाको विवरण एउटै दर्ता नम्बर (DR) हुने गरी प्रविष्ट गर्नु पर्नेमा दुईवटा छुट्टै दर्ता नम्बरमा पर्न गएमा के गर्ने?
दुईवटा छुट्टै दर्ता नम्बरमा पर्न गएमा सर्भिसडेस्कमा पुन: रुजुमा पठाई सर्भिस डेस्कले सो निवेदनको Reference नम्बर खोली सवै ब्यहोरा मेटाउनु पर्छ ।
जग्गाधनीहरु मध्यकैकुनै व्यक्तीलाई वारेशको रुपमा राख्नकानुले बन्देज लगाएको छैन तर प्रणालीमा राख्न सक्ने व्यवस्था छैन ।
1.	जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा कुन कुन प्रयोगकर्तालेकसरी प्रिन्ट गर्न सक्छ?
जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा प्रिन्ट गर्न अनुमति दिइएको खण्डमा जुनसुकै प्रयोगकर्ताले प्रिन्ट गर्न सक्छ।
नेपाल सरकारका नाममा कायम भएको जग्गाको पुर्जा प्रिन्ट गर्न सकिन्छ की सकिदैन?
नेपाल सरकारका नाममा कायम भएको जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्रिन्ट गर्नसकिने ब्यवस्था रहेको छैन तर नेपाल सरकारलाई संस्थाको रुपमा प्रविष्ट गरी कारोवार गरेको भए पुर्जा प्रिन्ट गर्न सकिन्छ ।
2.	जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा प्रिन्ट गर्दा तोकिएको Format/layout अनुसार नभए के गर्ने ?
जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा प्रिन्ट गर्दा तोकिएको Format/layout अनुसार नभएमा विभागले तोकेको (Recommendation Browser and Version: ) भर्सन अनुसारको Browserप्रयोग गर्नु पर्ने हुन्छ ।
3.	जग्गाधनी, अदालत वा सरकारी निकायवाटस्रेस्ताको प्रतिलिपि माग भई आएमा प्रणालीबाट कसरी दिन सकिन्छ?
राजस्व नतिरी स्रेताको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु पर्ने निकायहरु जस्तै अदालत¸ अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोग तथा विभिन्न आयोजनाहरुबाट स्रेस्ताको प्रतिलिपि माग भएमा प्रतिवेदन जग्गा/घर जग्गा प्रतिवेदन मार्फत प्रत्येक कित्ताको छुट्टा छुट्टैस्रेस्ता प्रतिलिपि दिन सकिन्छ ।
स्रेस्ताको प्रतिलिपि कस्ले कति पटक प्रिन्ट गरेको हो कसरी हेर्ने ?
स्रेस्ताको प्रतिलिपि कस्ले कति पटक प्रिन्ट गरेको होभन्ने विवरण (Log) हेर्न सकिने ब्यवस्थारहको छ।
जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य डोर सुविधा प्रयोग गरी भएको अवस्थामा नियम अनुसारको डोर शुल्क प्रणालीमा कसरी देखाउने ?
जग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य डोर सुविधा प्रयोग गरी भएको अवस्थामानंया निवेदन प्रविष्ट गर्ने पहिलो पेजमा दायाँतर्फ डोर सुविधामा टिक लगाएमा डोर बापतको दस्तुर प्रणालीमा देखिन्छ।
1.	अंश बुझेको भर्पाई कारोबारमा विक्रेता नै क्रेता भएको अवस्थामा करको गणना हुन्छ कि हुदैन ?
अंश बुझेको भर्पाई कारोबारमा विक्रेता नै क्रेता भएको अवस्थामा करको गणना हाल प्रणालीले स्वचालित रुपमा गर्दैन एडमिनबाट राख्नु पर्छ
2.	अंशवण्डा वा अंशभर्पाइमा करको दर मिलेन भने के गर्ने ।
करको दर नमिलेको कित्ताको कित्ताकाट कारोबार भए जुनियर अफिसरले संसोधन गर्दै सेभ गर्नु पर्छ र ससिम कित्ता कारोबार भए एडमिनबाट सच्याउनु पर्छ ।
3.	एउटै विक्रेताले एक आर्थिक वर्षमा प्रणालीबाटै गरेको कारोवार पूँजीगत लाभकर प्रयोजनका लागि नजोडिएमा के गर्ने?
एउटै विक्रेताले एक आर्थिक वर्षमा गरेको कारोवार पूँजीगत लाभकर प्रयोजनका लागी नजोडिएमा जोडेर लिनु पर्दछ ।LRIMS बाट गरेको कारोवार नजोडिएसो को कारण पत्ता लगाई जोड्न लगाउनु पर्छ ।
1.	कारोबारमा रहेको कित्ताको थैली अँक भन्दा प्रणालीमा प्रविष्ट भएको न्युनतम मुल्याङ्कन रकम बढी भएमा प्रणालीले कारोबार गर्न दिन्छ वा दिदैन ?
कारोबारमा रहेको कित्ताको थैली अँक भन्दा प्रणालीमासो कित्ताको लागि प्रविष्ट भएको न्युनतम मुल्याङ्कन रकम बढी भएमा प्रणालीले कारोबार गर्नदिदैन ।
2.	कित्ताको न्युनतम मुल्याङ्कन रकम प्रणालीमाकुन कुन फिल्डहरुको आधारमा स्वचालितरुपमागणना हुन्छ ?
कित्ताको न्युनतम मुल्याङ्कन रकम प्रणालीमा सो कित्ताको लागि प्रयोगकर्ताले छनौट गरेकोबाटो¸ ठाँउँ स्थान¸वर्ग¸ जग्गाको किसिम¸ जग्गाको प्रकृति¸कित्ता नम्बर आदिको आधारमा स्वचालितरुपमागणना हुन्छ।
3.	कित्ताको न्युनतम मुल्याङ्कन रकम कस्तो अवस्थामा प्रणालीमा स्वचालितरुपमागणना हुदैन? न्युनतम मुल्याङ्कन रकम स्वचालितरुपमागणना नभए के गर्ने?
कित्ताको न्युनतम मुल्याङ्कन रकमनै प्रणालीमा प्रविष्ट नगरेमा तथा प्रविष्ट गरेको भए पनि मुल्यान्कनका आधारहरु र सिफारीस फरक पर्न गएमा गणना हुदैन ।
1.	शेष पछिको बकस कसरी गर्ने ।
ड्यासवोर्डमा भएको लिखत पारित मोडुलमा शेष पछिको बकस पत्र उपप्रक्रीया छनौट गरी कारोबार गर्न सकिन्छ । लिखतपारीतनया निवेदनशेष पछिको बकर पत्र ।
2.	अधिकृत वारेशवाटजग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यप्रणालीबाट कसरी गर्ने ?
अधिकृत वारेशवाटजग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्दा विक्रेताको नाम प्रविष्ट गर्ने पेज/ट्यावमा अन्तिममा विक्रेता आएकोछ? भन्ने प्रश्नमा छैन भन्ने अप्सनमा टिक लगाउदाप्रणालीमा अधिकृत वारेशको विवरण राख्ने र फोटो¸ औठाकोछाप¸हस्ताक्षर सहित सवै विवरण प्रविष्ट गर्ने ठाउँ देखिन्छ।
साधारण वारेशवाटजग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यप्रणालीबाट कसरी गर्ने ?
साधारण वारेशवाटजग्गा /घर जग्गा हक हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गर्दा क्रेताको नाम प्रविष्ट गर्ने पेज/ट्यावमा अन्तिममा क्रेता आएको छ? भन्ने प्रश्नमाछैनभन्ने अप्सनमा टिक लगाउदा वारेशको विवरण प्रविष्ट गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।
प्रणालीमा संरक्षकको विवरण कसरी प्रविष्ट गर्ने ?
प्रणालिमा संरक्षकको विवरण नावालक भएमा नावालकको विवरण प्रविष्ट गरेपछि अभिभावक भने तलपट्टि आउछ सो लिङ्कमा Click गरी राख्न सकिन्छ
3.	प्रणालीमा व्यवस्था भएको “गुठी अधिनस्थ जग्गाको कारोवार” मोडुलको प्रयोजन के हो ?
जग्गाधनीको हक हस्तान्तरण अन्य मोडुलबाट भए जस्तै मोहीको हक हस्तान्तरण(गुठी जग्गाको कारोबार) गर्ने प्रयोजनका लागि“गुठी अधिनस्थ जग्गाको कारोवार” मोडुलको व्यवस्था गरिएको छ।
4.	नेपाल सरकारकोनाममा लगतकायम कसरी गर्ने?
नेपाल सरकारको नाममा लगतकायम गर्दा शंसोधन मिसिलबाट आएमा शंसोधन मोडुलमा नेपाल सरकारका नाममा लगतकायम उपप्रक्रिया छनौट गर्नुपर्दछ ।
नेपाल सरकारको नाममा पुरा(ससिम) कित्ता कसरी कायम गर्ने ?
नेपाल सरकारको नाममा पुरा कित्ता लगतकायम गर्दा शंसोधनमोडुलमा नेपाल सरकार पुरा कित्ता उपप्रक्रिया छनौट गर्नु पर्दछ ।
नागरीकता नम्बर/जारी मिती नभएको ब्यक्तीको जग्गा नामसारी कसरी गर्ने?
नागरिकता नम्बर/जारी मिती नभएको ब्यक्तीको जग्गा नामसारी गर्दा प्रणालीमा जग्गाका आधारमा नै खोजी गर्ने ब्यवस्था गरिएकोले नागरिकता नम्बर र जारी मिती नभएपनि नामसारी गर्न मिल्छ ।
कित्ताको हक हिस्सा मात्र नामसारी गर्दा के गर्नु पर्छ ?
हक हिस्सा मात्र नामसारी गर्दा जुन जग्गाधनीको हक हिस्सा नामसारी हुने हो सो को विवरण मात्र जग्गाधनी विवरणमा प्रविष्ट गरी (अन्य जग्गाधनीलाइ नराख्ने) गर्न सकिन्छ ।
हालसाविक गर्दा प्रणालीमा नभएको सिटनम्वर आए भने के गर्ने ?
हालसाविक गर्दा प्रणालीमा नभएको नंया सिटनम्वर आए स्थानीय प्रणाली व्यवस्थापक(Admin) लेसो सिट नम्बर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी दिनु पर्छ।
अंशवण्डा गर्दा कुनै अंशियारले जग्गा र नगद बुझी लगेमा कसरी कार्य गर्ने?
अंशवण्डा गर्दा कुनै अंशियारले जग्गा र नगद बुझी लगेमा प्रणालीको ड्यासवोर्डमा व्यवस्था गरिएको गैर घरजग्गाको कारोवार मोडुलमा अंशवण्डा छनौट गरी गर्न सकिन्छ । यसरी गैर घरजग्गाको कारोवार मोडुलमा इन्ट्री गर्दा Reference Number भनेको ठाउँमा जग्गाको कारोवार गर्दा आएको Reference Number राख्नु पर्दछ ।
सरकारी जग्गार रैकर निजी जग्गा को विच सट्टा पट्टा हुने अवस्थामा प्रणालीमा कसरी गर्ने ?
सरकारी जग्गा र रैकर निजी जग्गाको विचमा सट्टा पट्टा हुने अवस्थामा कार्यालय प्रमुखलेप्रमुख मालपोत अधिकृत भएको युजर(CLRO)बाट सो सरकारी जग्गालाई एक पटकका लागि कारोवारमा संलग्न हुने गरी फुकुवा गर्न सक्छ । सो ब्यवस्था जग्गा घरजग्गा प्रतिवेदन भित्र उपलब्ध छ ।
लिखतबाट तथा मिसिलबाट ट्रायल चेक भइ घट/बढ भएमा प्रणालीमा सो कारोबार कसरी गर्ने ?
लिखतबाट ट्रायल चेक भई जग्गा घटी वा वढी हुने अबस्थामा सर्भिस डेस्कले विद्धुतिय अभिलेख संसोधन मोडुलबाट स्पष्ट कैफियत सहितप्रविष्ट गरी स्वीकृतीको लागिस्थानीय प्रणाली व्यवस्थापक समक्ष पेश गर्नु पर्छ ।
1.	रोक्काको निवेदन स्वीकृत भए पछि ऋण रकम / रोक्का राख्ने निकायको नाम आदि विवरण परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि सकिदैन ?
रोक्काकोनिवेदनस्वीकृतभएपछिऋणरकम / रोक्काराख्नेनिकायकोनामआदि विवरण परिवर्तन गर्न सकिदैन ।
2.	एउटै निकायबाट वा फरक फरक निकायबाट रोक्का रहेको कित्तामा थप रोक्का राख्न मिल्ने वा नमिल्ने ? मिल्ने भए कसरी राख्ने ?
रोक्का रहेको कित्तामा अदालतबाट¸ सरकारी निकायबाट जती पटकपनि रोक्का रहन सक्छ । त्यस्तै पहिले रोक्का राख्ने वित्तीय संस्था वा सहकारी वा अन्य निकायले पुन दोहोराएर राख्न सक्छ ।
एउटै कित्तामा एक भन्दा बढी रोक्का भएकोमा एकै पटक कसरी फुकुवा गर्ने ?
एउटै कित्तामा एक भन्दा बढी रोक्का भएकोमा एकै पटक कसरी फुकुवा गर्न विद्धुतिय अभिलेख संसोधनमा गइ फुकुवा गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
2.	LIN आई डी भनेको के हो? के प्रणालीमा भण्डारण भएका सवै जग्गाधनीको LIN हुन्छ?
LIN को पुरा फर्म Land Owner Identification Number हो नेपालीमा जग्गाधनी संकेत नम्बर भनिन्छ । प्रणालीमा भएका सवै जग्गाधनी को LIN हुदैन । एकचोटी LRIMS कारोवार गरेमा वा विद्धुतिय अभिलेख संसोधनबाट कुनै पनि कुरा संसोधन भएमा उक्त जग्गाधनीको LIN आउछ ।LIN बन्ने आधारमा ब्यक्ती हो की संस्था हो भनी छनौट गरीन्छ जस्तै ब्यक्ती भए P बाट शुरु हुन्छ भने संस्था भए O बाट शुरु हुन्छ । ब्यक्ती पुरुष भए P पछि M जोडिन्छ PM त्यस्तै महिलामा PF / तेस्रो लिंगमा PT हुन्छ र बाकी नम्बरहरु क्रमैसंग सिस्टममा भएकोमा वढ्दै जान्छ । यो ११ अंक को हुन्छ । संस्थाको लागी पनि O बाट शुरु भइ संस्थाको प्रकार अनुसार LIN Generate हुन्छ जस्तै (OG – Government, OS – Social, OO – Government Office, OF – Financial, OA – Academic, OR – Recreation, OE – Enterprise, OP – Private, OC – Community, OM – Mid Government, ON – NGO, OT - Other).
Total Visits :479092